The Surrogate (2020) | MM Movie Store
ဂကျြဈဆိုတဲ့ကောငျမလေးတဈယောကျက NGOတဈခုမှာ အလုပျလုပျနပွေီး တဈနကေ့တြော့သူ့အခဈြဆုံးသူငယျခငျြး၂ယောကျအတှကျ အငှားကိုယျဝနျဆောငျပေးဖွဈသှားပါတယျ……နောကျပိုငျး ဆေးစဈကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ ဗိုကျထဲကကလေးလေးမှာ မှေးရာပါ ရောဂါရှိနနေိုငျတာသိလိုကျရတဲ့အခြိနျ
သူ့သူငယျခငျြး၂ယောကျက မမှေးဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပွီး ဂကျြဈကို ကိုယျဝနျဖကျြခဖြို့ပွောပါတော့တယျ…… အဲ့ဒီအခြိနျ ဂကျြဈအနနေဲ့ ဘယျလိုတုနျ့ပွနျအဖွပေေးမလဲ…..သူကိုယျတိုငျကကောအဲ့ကလေးကို လိုခငျြရဲ့လား….. အဲ့ကလေးကိုကောမှေးဖွဈမှာလား…..ပတျဝနျးကငျြကကော ဘယျလိုဖိအားပေးကွလဲ……
အစရှိတဲ့ မေးခှနျးတှရေဲ့အဖွကေိုတော့ ဒီဇာတျကားလေးကိုကွညျ့ပွီးအဖွရှောလိုကျရအောငျ….
ဒီဇာတျကားလေးက မိမိတို့နထေိုငျရာပတျဝနျးကငျြမှာ ကွုံနကေအြရာတှေ၊ ခှဲခွားဆကျဆံခံရမှုတှေ၊ ဖိအားပေးခံရတာတှေ၊ အမွငျမတူမှုတှကေို အကောငျးဆုံးမီးမောငျးထိုးပွထားပွီး မိခငျမတ်ေတာကို အကောငျးဆုံးဖျောကြူးထားတဲ့ ကားလေးတဈကားဖွဈတဲ့အတှကျ ကွညျ့သငျ့သော ရုပျရှငျကားတှထေဲမှ တဈကားဖွဈပါတယျ………..
ဂျက်စ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်က NGOတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေပြီး တစ်နေ့ကျတော့သူ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၂ယောက်အတွက် အငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးဖြစ်သွားပါတယ်……နောက်ပိုင်း ဆေးစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဗိုက်ထဲကကလေးလေးမှာ မွေးရာပါ ရောဂါရှိနေနိုင်တာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်
သူ့သူငယ်ချင်း၂ယောက်က မမွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ဂျက်စ်ကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဖို့ပြောပါတော့တယ်…… အဲ့ဒီအချိန် ဂျက်စ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်အဖြေပေးမလဲ…..သူကိုယ်တိုင်ကကောအဲ့ကလေးကို လိုချင်ရဲ့လား….. အဲ့ကလေးကိုကောမွေးဖြစ်မှာလား…..ပတ်ဝန်းကျင်ကကော ဘယ်လိုဖိအားပေးကြလဲ……
အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးအဖြေရှာလိုက်ရအောင်….
ဒီဇာတ်ကားလေးက မိမိတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြုံနေကျအရာတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေ၊ ဖိအားပေးခံရတာတွေ၊ အမြင်မတူမှုတွေကို အကောင်းဆုံးမီးမောင်းထိုးပြထားပြီး မိခင်မေတ္တာကို အကောင်းဆုံးဖော်ကျူးထားတဲ့ ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်သင့်သော ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှ တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်………..